Kormeeraha Guud - Dugsiyada Dadweynaha ee Harta Biyaha ee ISD 834
Ku soo dhowow Dugsiyada Dadweynaha ee Stillwater
Farxad weyn ayey ii tahay inaan ku barto degmadeena dugsi iyo dugsiyadeena sare. Stillwater waa degmada ugu da'da weyn dugsiga gobolka Minnesota. Tan iyo markii guriga ugu horeeya ee hal-qol ah la aasaasay sanadkii 1848 waxaan dhisaynay taariikh dheer, taajir ah oo tayo tayo leh u leh ardaydayada.
Waxaan leenahay shaqaale heer sare ah oo heegan u ah ogaanshaha ardayda shaqsiyan iyo ka caawinta la kulanka baahiyahooda gaarka ah. Waxaan ardayda siineynaa fursado badan oo xagga tacliinta ah, farshaxanka iyo ciyaaraha fudud ah si ay u sahamiyaan waxyaabaha ay xiiseeyaan isla markaana ay u horumariyaan hamiga, waxaanna rajo ka qabnaa guul arday kasta oo barta.
Sannadaha oo dhan deggeneyaasheennu waxay muujiyeen rabitaankooda inay ku noolaadaan mid ka mid ah degmooyinka ugu wanaagsan dugsiyada Minnesota. Waan is taageersanahay waana is baranay. Meesha aad ka hesho bulsho weyn, waxaa laguu xaqiijin karaa inay jiraan iskuullo heerkoodu sarreeyo.
Fadlan istaag oo booqo!
Shaxda Maamulka iyo Hoggaaminta
Kaaliyaha Maamulka ee Kormeeraha guud & Guddiga Dugsiga
Akhriso fikradaha iyo aragtiyaha ugu dambeeyay ee kormeeraha guud ee kujira tiirarka Degmada.
Dhaxalka sanad dugsiyeed cajiib ah
Waxaa jira ereyo badan oo loo adeegsan karo in lagu sifeeyo sannadkan ina dhaafay. Laakiin aniga ahaan, erayga cajiibka ah ayaa liiska ugu sarreeya.
Mop Bucket Philosophy: Fikradaha laga helo ilaaliyaha
Qoraaga martida Jeremy Schurr wuxuu la wadaagayaa indha indheyntiisa sanad dugsiyeedka adag iyo siyaabaha aan dhamaanteen isugu nimid caruurta.
Kharashaadka dhabta ah ee aafada ku dhaca iskuuladeena deegaanka
Degmooyinka gobolka oo dhan waxaa soo food saaray hoos u dhac ku yimid isqorista iyo caqabado dhaqaale oo ka dhashay.
Qoraaga martida Jeremy Schurr wuxuu la wadaagayaa indha indheyntiisa sida cudurka faafa noogu wada keenay caruurteenna.
Kooxda Hogaanka Degmada
Kaaliyaha Kormeeraha guud
Carissa Keister, APR
Agaasimaha Waxbarashada iyo Kaqeybgalka Ardayda
Agaasimaha Adeegga Taakulaynta Ardayda
Agaasimaha Tiknoolajiyada Barashada & Naqshadeynta Nidaamka
Agaasimaha Waxbarashada Bulshada iyo Xiriirka Bulshada